Daawo: Faahfaahin laga bixiyay heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka Carab ee saldhigga Dekedda Berbera – Balcad.com Teyteyleey
Daawo: Faahfaahin laga bixiyay heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka Carab ee saldhigga Dekedda Berbera
Magaalada Dubai ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta waxaa ka dhacay maalintii Sabtida heshiis dhex maray wafdi ka socda Dowladda Somaliland iyo Imaaraadka Carabta, kaasi oo si rasmi ah qalinka ugu wada duugeen wakiilada labada dhinac.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiska ay la galeen Imaaraadka Carabta inay saldhig Milateri ka sameystaan dekedda Berbera, isagoona sheegay in heshiiskaasi dhinacooda The best prices for desyrel are gathered at our store and if you want to take advantage of our deals, as we offer it for only 0.76 USD! ay ugu jirto faa’iidooyin dhowr ah.
“Somaliland waa dal madax bannaan oo dimoqoraadi ah, wuxuuna u madax bannaan yahay inuu heshiisyo la geli karo shirkado iyo dowladaha caalamka” ayuu yiri Dr. Sacad Cali Shire oo meesha ka saaray inay hoos tagaan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxaa kale oo uu sheegay in heshiiskaan ay ka mid tahay mashaariic laga hirgelinayo magaalada Berbera, sida in Imaaraadka Carabta ay dhisayaan garoon diyaaradeed laga hirgelinayo magaalada Berbera.
Dhismaha waddo 250km ah una dhaxeysa Berbera iyo Wajaale iyo mashaariic kale, wuxuuna hoosta ka xariiqay in heshiiska ay wada galeen Somaliland iyo Imaaraadka Carabta uu soconayo muddo 25-sano ah.
In ka badan 50 qoys kana tegay gobolada dhexe oo gurmad loogu sameeyay Muqdisho
Falanqeynta Maanta: Farmaajo iyo Khayre soomaaliyeey hal sano oo Fursad ah siiya, hadda ka daaya Habaarka!